आज फेरी ह्वा*त्तै घ*ट्यो सुनको मूल्य ,यस्तो छ आजको बजार भा*उ ! – ताजा समाचार
आज फेरी ह्वा*त्तै घ*ट्यो सुनको मूल्य ,यस्तो छ आजको बजार भा*उ !
काठमाण्डौ – नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य घ*टेको छ। बुधबारको तु*लनामा सुन तोलामा एक हजार रुपैयाँले घ*टेको नेपाल सुनचाँदी व्य*वासायी म*हासंघले जानकारी दिएको छ। म*हासंघका अनुसार आज बजारमा सुन प्रतितोला ७१ हजार रुपैयाँमा का*रोबार भइरहेको छ। मंगलबार तोलाको ७२ हजार पुगेको थियो। आज बजारमा ते*जाबी सुनको मूल्य तोलामा ७० हजार ७ सय रुपैयाँ छ। त्यस्तै बजारमा आज चाँदीको मूल्य पनि घ*टेको छ। मंगलबार तोलामा ८९० रुपैयाँ भएको चाँदी आज ८६५ रुपैयाँमा का*रोबार भइरहेको छ।
पछिल्लो समय नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मुल्यमा उ*तारचढाव आइरहेको छ। त्यस्तै बिहीबार कोरियन वन बाहेक सबै विदेशी मुद्राको भाउ केही ब*ढेको छ । बिहीबार नेपाल राष्ट्रबैंकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११३ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर ११३ रुपैयाँ ९६ पैसा तोकेको छ । हिजो पनि खरिददर ११३ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर ११३ रुपैयाँ ९२ पैसा थियो । साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ३८ पैसा रहेको छ । हिजो खरिददर ३० रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको थियो ।